Anabolic Steroid bulk powder eluhlaza RFQ
Siyabonga ngokuqhagamshelana nathi! Sizakuqhagamshelana nawe kungekudala, buyela ku ikhaya iphepha okanye ubone ngaphezulu iimveliso.
Indlela yokubeka umyalelo ovela kuthi?
Kuba iwebhusayithi yethu ayinamsebenzi wokuodola kwi-intanethi, ke iiodolo zenziwa nge-imeyile okanye kuWhatsapp:
❶ Nceda usazise ukuba zeziphi iimveliso ozifunayo, kunye nobungakanani bemveliso nganye.
❷ Siza kukunika elona xabiso lilungileyo ngexabiso lokuthumela ngokukhawuleza.
❸ Ukuba ucinga ukuba ixabiso liyakusebenzela, ungakhetha indlela yokuhlawula ukwenza intlawulo. (singavuma ukudluliselwa kwebhanki kunye neBitcoin, iTether)
❹ Ipasile yakho iya kupakishwa ize ithunyelwe kwiiyure ezili-12 emva kokuba intlawulo iqinisekisiwe.
❺ Inombolo yokulandela umkhondo kunye nomfanekiso wokupakishwa uya kubonelelwa ngeentsuku ezi-2 emva kokuba ipasile ithunyelwe.
❻ Unako ukulandelela ipasile kwi-intanethi kwaye siya kukwazisa kwakhona xa ipasile ifikile kwindawo yasekhaya.
❼ Fumana ipasile kwimpumelelo.
Indlela yokuqinisekisa umgangatho wemveliso?
Sinelebhu ye-HPLC kunye neqela labasebenzi be-QC. I-COA, i-HPLC, i-HNMR kunye neengxelo zokuvavanya ezinxulumene nazo ziyafumaneka. Amaphepha ovavanyo liqela lesithathu iilebhu aya kunikwa ixesha nexesha.
Ndiyihlawulela njani iodolo?
Ucingo lwebhanki, i-bitcoin, i-tether(USDT).
Loluphi uhlobo lwemeyile oyisebenzisayo kunye nexesha lokuhambisa?
Kuxhomekeke kwilizwe lakho / idilesi yokuthunyelwa. Ngokuqhelekileyo, i-Fedex, i-DHL, i-EMS, i-HKDHL, i-HKEMS, umgca othile okhethekileyo wobugcisa unokubonelelwa. Ixesha lokuhambisa lixhomekeke kwiindlela zokuthunyelwa, kuya kuthatha iintsuku ze-8-15 zokusebenza nge-Fedex okanye i-DHL, inokufuna iintsuku zokusebenza ze-18-25 ngomnye umgca.
Uthini malunga nezinga lempumelelo yokuhanjiswa kwepasile?
Impahla yethu yokupakisha ayiyi kuba nolwazi lwehomoni kwaye ingathunyelwa kwiindawo ezahlukeneyo zaseChina. Okwangoku, izinga lokucocwa kwempahla esilithumela eUnited States naseYurophu yi-99%, Ngokubhekiselele eKhanada, eOstreliya, eBrazil ekwindawo enexabiso eliphezulu kakhulu, sikwanazo iindlela ezintsha zokudlula kumasiko. Ukuthumela kwakhona umgaqo-nkqubo ngokupheleleyo kwezinye iindawo kukwabonelelwe.
Indlela yokuqinisekisa ukuba imali yam ikhuselekile?
Yonke iodolo ye powder yethu eluhlaza inokubuyiselwa imali ngaphambi kokuba iimpahla zithunyelwe. Kuzo zonke iintlawulo kwi-AASraw, ziqinisekisiwe ukuhoxiswa, ukuhlawula, ukudluliselwa, okanye nantoni na esinokuyenza kwiminyaka eyi-5.
Ingaba kukho umyinge we-odolo encinci yesixa?
Ewe, i-min order yi-10-100g, kuxhomekeke kwiimveliso ezahlukeneyo.
Ingaba zikhona iisampulu zasimahla?
Hayi, asikho isampuli yasimahla. Kodwa sinokuxhasa i-odolo yesampulu ngaphambi komyalelo wesambuku. Iindleko zesampulu(iindleko zokuthumela azifakwanga) ziya kutsalwa kwiodolo yakho elandelayo.
Ndingasifumana izaphulelo kwi-odolo yesambuku?
Kunjalo. Isaphulelo esikhulu nje ukuba iodolo yakho ifike ngexabiso elithile. Ndiyathemba ukuba ixabiso aliyi kubavimba intsebenziswano yethu. Into esiyifunayo kukwakha intsebenziswano yexesha elide kunye nabathengi bethu kwaye siya kuzama konke okusemandleni ethu ukuxhasa abathengi bethu ukuze bafumane ishishini elingakumbi.
Ngaba unokuqinisekisa ukufumaneka kokufumaneka?
Ngokuqinisekileyo, singumenzi we-steroids kwaye sinefektri, zonke iimveliso zinesicwangciso sokuvelisa minyaka yonke.Ukongezelela, izinto zethu eziluhlaza kwindawo yokugcina impahla zihlelwe kwaye zilawulwa yinkqubo, eya kuqinisekisa ukunikezelwa ngexesha.